Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Miroborobo ankehitriny ny fizahan-tany Puerto Rico
Puerto Rico no manana isan-jaton'ny olona vita vaksiny tanteraka amin'ny coronavirus any Etazonia hatramin'ny 19 Oktobra, araka ny angon-drakitra avy amin'ny Centers for Control and Prevention aretina. Izany ve no mahatonga ny fizahantany miroborobo eto?
Ny Dashboard fanarenana an'ny Fikambanana Mpandehandeha Amerikanina miaraka amin'ny angon-drakitra avy amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia manasongadina an'i Puerto Rico ho mpitarika amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Rehefa mampitaha ny fandaniam-bola isam-bolana, eo ho eo, ny Etazonia dia manodidina ny 11% ambanin'io fotoana io roa taona lasa tamin'ny volana septambra. Fa ny fandaniana amin'ny dia any Puerto Rico dia mihoatra ny 23% ambonin'io marika io. Raha fanjakana valo any Etazonia no mahita ambaratonga fandaniam-bolan'ny mpitsidika ambonin'ny taona 2019, dia eo anelanelan'ny 1% ka hatramin'ny 9% ambony izany raha 23% kosa ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika an'i Puerto Rico noho ny roa taona lasa izay.
73% salama amin'ny totalin'ny isan'ny mponina ao Puerto Rico 3.3 tapitrisa no voarohirohy manohitra ny otrikaretina, hoy ny angona CDC. Ny faritany amerikana koa dia manana ny taha ambany indrindra amin'ny tahan'ny fandefasana fiarahamonina COVID any Etazonia, ary tranga 18 monja no voamarina teo amin'ireo mponina 100,000 XNUMX tao anatin'ny fito andro lasa.
Ireo fironana tsara ireo dia mampiakatra ny fivahinianan'ny Nosy, tsy ny kely indrindra dia ny golf. Ny fampianarana 18, ny morontsiraka ary ny toerana hafa nohomboan'ny tropikaly dia mety indrindra amin'ny fialan-tsasatra sy ny fanarenana mandritra ny fararano sy ny ririnina, raha eo ho eo ny mari-pana amin'ny taona 80.
Miroborobo ny golf any Pôrtô Rikô mandritra ny areti-mandringana, nateraky ny filaminana sy ny halavirana ara-tsosialy hita amin'ny lalao sy amin'ny Nosy. Ny fampianarana dia manomboka amin'ny rendrarendra ka hatrany amin'ny munisipaly, miparitaka manerana an'i Puerto Rico miaraka amina akaikin'ny San Juan. Ny fahitana an'i Oceanside, ny hazo voanio, ary ny ala tropikaly dia mandahatra ny toerana misy azy. Ny isa amin'ny vidiny, ny tany, ny fomba fanao ary ny kojakoja mifandraika amin'izany dia samy hafa sy mifameno.
Ny Nosy dia ivon'ny rivotra any Karaiba. Ny finamanan'ny mpandeha lavitra dia hita ao amin'ny kolontsaina miteny roa any Puerto Rico, vola amerikana, ary tsy mila pasipaoro ho an'ny olom-pirenena amerikana.